Apple inotangisa beta 3 yeIOS 11.2, tvOS 11.2 uye watchOS 4.2 yevagadziri | IPhone nhau
Apple ichangotanga iyo yechitatu beta vhezheni yeIOS 11.2, tvOS 11.2 uye watchOS 4.2 yevagadziri. Sezvo zvave zvichiita kwevhiki dzinoverengeka, ese beta vhezheni yeavagadziri anoburitswa neMuvhuro uye izvi hazvigone kuve zvakasiyana.
Kubva kurudyi bat inoita kunge haina shanduko yakawandisa kana ichienzaniswa neyekare beta 2 yeiyi vhezheni yeIOS, sezvo zvisingaite sekunge paine shanduko dzakawandisa mu beta 3 ye tvOS 11.2 uye watchOS 4.2, asi isu ticha tsanangura izvi zvakanyatsonaka mumaawa anotevera uye kana paine nhau dzakakosha isu tichavawedzera mune ino imwe nyaya.
Semazuva ese zvinoita sekunge isu tine vhezheni neyakajairika yemukati yekuvandudza yeanoshanda system iyo inowedzera kuvandudza mukushanda kwesystem kururamisa kwekukanganisa uye mhinduro kune akasiyana mabugs ezvekare vhezheni, ese anounza shanduko mukushanda kwemukati uye mashoma mune anoonekwa kune mushandisi. Idzi shanduro nyowani dzevagadziri dzakakosha zvisinei nezvose uye senguva dzose vanogadzirisa zvikanganiso zvinogona kunge zvisingaonekwe, asi zvakakosha pakushanda kwakanaka kwesistimu.
Muchiitiko cheiyo beta 2 vhezheni yeIOS 11.2 kwakauya ruzivo rweApple Pay Cash, sisitimu yekubhadhara pakati pevashandisi inoshanda kubva kuMessage uye matsva mapepa. Ichi chitsva chinogona kuve nehumwe ruzivo kuti hukwenenzverwe mukuwedzera pakupedzisa kuchitsanangudza kwekuitwa kwayo pasi rese, kubvira parizvino haishande kunze kweUnited States.
Iyo Apple Watch inogamuchirawo yayo beta 3 yewatchOS 4.2, zvakare tvOS 11.2 uyezve macOS 10.13.2 zvakare ine yayo yechitatu beta inowanikwa kune vanogadzira. Tinovimba kuti mumaawa mashoma anotevera kana pasina zvakakundikana uye zvese zvinoshanda zvakajairika, tichava nazvo iOS 11.2, tvOS, uye macOS yeruzhinji beta shanduro dziripo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple inoburitsa beta 3 yeIOS 11.2, tvOS 11.2 uye watchOS 4.2 yevagadziri
Mhoroi, unoziva here kuti ndeapi nhau kana shanduko kana mhinduro dzekukanganisa?
FBI ingadai yakakanganisa zvakanyanya kuyedza kuwana iyo iPhone yemunhu akapara kuuraya kweTexas